Ii-FAQs-i-Guangzhou Red Sunshine Co., Ltd.
Sigxile ikakhulu kumvelisi weglavu kunye nokuthumela ngaphandle.
Zingaphi iintsuku onokuthi ugqibezele iodolo ye-20 yeenyawo zesikhongozeli?
Ngesiqhelo sinokugqiba i-1 * 20 yesikhongozeli ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi yakho ye-L / C, kunye ne-1 * 40HQ ngeentsuku ezingama-45.
Ithini intlawulo yesampulu yakho?
Iisampulu zecalue engaphantsi kwe-10 yeedola zisimahla, nangona kunjalo, i-courier charfe kufuneka ihlawulwe kwangaphambili.Ukuba une-akhawunti yomthwalo oqokelelweyo, singakuthumelela umthumeli wakho.Okanye unokuhlawula iindleko zothutho ngePaypal kuthi kuqala.
Kuthekani ukuba ndinezicelo ezikhethekileyo zeemveliso?
Ngokusisiseko, siya kukunika ingxelo kwangexesha nokuba sinokuvelisa okanye hayi ngokwezicelo zakho, ngokwesiqhelo kuya kubakho intlawulo eyongezelelweyo kwizicelo zakho ezizodwa.Uninzi lweeglavu, sinokuprinta ilogo yomthengi, ikhadi lephepha, iibhegi kunye neebhokisi.
Lithini ixesha lakho lokuhlawula?
1. T/ T 30% idipozithi kwangaphambili & isixa-mali sebhalansi T/ T ngokuchasene nekopi yephepha lokuqala letyala.(ilizwe elikhethekileyo okanye ishishini lokuqala linokufuna ibhalansi ehlawulwe kwangaphambili).
2. I-L/C engenakuguqulwa xa ibonwa.
3. Iiodolo zeSamall zinokuhlawulwa ngePaypal, west- union, money gram of Cash.
Leliphi izibuko lamaTshayina oqhele ukuzisa iimpahla?
Izibuko laseGuangzhou, izibuko laseShenzhen, izibuko laseQingdao, izibuko laseNingbo.
Ithini i-MOQ yakho (ubuncinane bomyalelo wobungakanani)?
1. Uninzi lweeglavu 500-1000dozens.
2. Umyalelo wetyala wamkelekile okokuqala.